यी हुन् सुधिर चौधरीलाई सगरमाथा आधार सिविर पुर्याउने पाइलट सिद्धार्थ गुरुङ, त्यो दिन के भएको थियो खुलाए सबैकुरा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी हुन् सुधिर चौधरीलाई सगरमाथा आधार सिविर पुर्याउने पाइलट सिद्धार्थ गुरुङ, त्यो दिन के भएको थियो खुलाए सबैकुरा!
admin January 23, 2021 January 23, 2021 समाचार	0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तरवार्ताका लिएपछि भारतीय टिभी जी न्युजका सम्पादक सगरमाथाको आधार सिविरमा पुगेर जुन कुरा बोले त्यसले नेपालमा तरंग उत्पन्न भयो । उनले काला पत्थरमा पुगेर विश्वकै सवोच्च शिखर सगरमाथालाई देखाउँदै त्यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखे । उनलाई सगरमाथाको आधारसिविर कालापत्थर सम्म लैजाने पाइलट थिए सिद्धार्थ गुरुङ । **समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरमा सगरमाथाको आधार सिविर जाँदा नै सुधिर निकै उत्साहित देखिएको उनले बताएका छन् । नेपाल खबर अनलाइनका बसन्त अर्याल संगको अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘हेलिकोप्टरमा बस्ने बेलामा दंगै थिए सुधीर चौधरी। कालापत्थर गएर खिच्नेबेला त्यस्तो खिचेर आएछन्। प्रिप्लान रै’छ। टीआरपीको लागि हुनसक्छ। भ्युज बढाउने के के भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै होला।
म हेलिकोप्टरभित्रै बसेँ। त्यस्तो कुरा गरेका रहेछन् भन्ने पछि मात्रै थाहा पाएँ।’ कालापत्थरमा रेकर्ड गरिएको आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममा भारतले सगरमाथालाई ‘माउन्ट सिकदर’ नामाकरण गर्नुपर्ने माग राखेपछि त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भयो । त्यस पछि पनि उनले स्टुडियोवाटै त्यस्तो माग राख्नुको कारणवारे प्रस्ट्याउने कोशिस गरे ।
विश्वको यो सर्वोच्च शिखरलाई चिनियाँहरु चोमोलुङ्मा भन्छन् भने अन्य मुलुककाले माउन्ट एभरेस्ट । बिश्वमा चर्चित नेपालकै शान भनेर चिनिने माउन्ट एभरेष्टलाइ चौधरीले भने सगरमाथाको सुरुवाती उचाइ पत्ता लगाउने भारतीय नापी विभागका कर्मचारी राधानाथ सिकदरको नाममा यसको नामाकरण गर्नुपर्ने तर्क गरे, जसले ठूलो विवाद निम्त्यायो।
उनै सुधिरलाई आधार सिविर लगेका पाइलटले आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य पुरा गरेका मात्र हुन् । पाइलट गुरुङले चौधरीको कार्यक्रमलाई वास्ता गर्न नहुने बताउँछन्। प्रिप्लान रै’छ। टीआरपीको लागि हुनसक्छ। भ्युज बढाउने के के भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै होला। म हेलिकोप्टरभित्रै बसेँ। त्यस्तो कुरा गरेका रहेछन् भन्ने पछि मात्रै थाहा पाएँ।’ **समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***